Sharciyada hoygan si buug loogu daro: su'aalo iyo jawaabo
Waa maxay hoygani maxayse tahay ujeedadu?
Qaybtani waa xog-ururiye (database) ay ku jiraan buugta afsomaliaga ku qoran. Buug kasta waxaa raacsan warbixin yar oo ku saabsan qoraaga iyo wuxuu buugu ka hadlaayo iyo halka laga iibsan karo si ay u fududaato helitaankiisu.
Dadka soo booqda websitekani waxay ku dhaafi karaan faalo ku saabsan buugga. faalo kasta waxaa ka mas'uul ah qofkii qorey, loomana raaci karo REDSEA-ONLINE.COM
Maxaa loo baahanyahay si loogu xayaysiiyo buug afsoomali ku qoran halkan?
Xayaysiinta buugta halkani waa lacag la'aan.
Yaa ku dari kara buuggayga afsomaliga ku qoran ama buug aan akhriyey oon ku talinaayo in lagu daro halkan?
Qofkastaa wuu noo soo jeedin karaa in lagu daro liiskan buug afsomali ku qoran oo uu akhriyey/day amase isagu/iyadu qoray/tay. Waxaanu idinku dhiiri galinaynaa inaad noo soo sheegtaan buug kasta oo aad u aragtaan inuu nasteexo u qoran. Buuxi foomkan, markaa REDSEA-ONLINE.COM ayaa eegaya taladaada oo go'aan ka gaadhaya.
Si buugga aad soo jeedidsay halkan loogu daro, conditionka kaliya ee REDSEA-ONLINE.COM ay ku xidhaysaa waa in buugga ay arkaan oo ama qofkamid ah REDSEA-ONLINE.COM uu iibsaday buugga amase uu meel kale ku arkay (laybareeri, iskuul, iwm.). Haddii aanay taasi suuro gal ahayn, REDSEA-ONLINE.COM waxay la xidhiidhi doonaan qoraaga si uu nuqli ugu soo diro.
Habkee buugta lagu galinayaa liiska?
Qoraaga ama qof kale ayaa halkan soo galinayaa buuga warbixintiisa (cinwaanka, qoraaga, waxa uu ka hadlaayo, iwm);
Maamulaha qaybtan uga mas'uulka ah REDSEA-ONLINE.COM wuxuu waydiinayaa bahda REDSEA-ONLINE.COM in qof kamid ahi arkay/haysto buugaas;
Haddii aanay jirin cid haysaa markaa Maamulaha ayaa qoraagaa dib ula xidhiidhayaa inuu nuqli ugusoo diro qofkamid ah REDSEA-ONLINE.COM;
Marka REDSEA-ONLINE.COM ay helaan buugga way sawirayaan jaldiga (scan), waanay eegayaan in uu yahay buug xogtiisu ay faaiido u leedahay ummadda (ma jeclin in la takooro qoraalka uu qof qorey, laakiinse buugtii ay bahda REDSEA-ONLINE.COM u arkaan inuu dhibaato keeni karto, fasax bay isu siinayaan inaanay halkan ku daabicin;
Haddii Maamulaha uu markaa oggolaado, buugu wuxuu galayaa liiska WWW.REDSEA-ONLINE.COM/SLBOOKS.
Maxaa lagu samaynayaa buugta laydiin soo diro si aad halkan ugu daabacdaan?
Bahda REDSEA-ONLINE.COM waxay mustaqbalka dhisi doonaan makatabad si lacag la'aan ah wax loogu akhrisado oo lagu kaydiyo gaar ahaan buugaata afsoomaliga ku qoran. Buugta aad noo soo dirtaan waxaa loogu tabaruci doonaa maktabadahaas.
Wixii aan halkan ku caddayn waydii AfSomali Books Section at redsea-online.com